Emepụtara ihe nlere Meizu 16Xs | Gam akporosis
N'ihe banyere nlele igwefoto nke Meizu 16Xs nke na-akọwapụta ikike nke oghere ya dị obosara
El Meizu 16Xs Ọ ga-abụ ndị mbụ ama si Chinese emeputa na a Mmaji igwefoto ka a n'azụ foto modul. Nke a ga - abụ ekwentị dị n’etiti na - emebe ngosipụta zuru oke.
Ọ bụ ezie na enwebeghị ọtụtụ ihe banyere ya n'ime izu ndị na-adịbeghị anya, N'oge a, foto abụọ ejiri ekwentị na-apụta: onye weere na isi ihe mmetụta na ndị ọzọ na mbara n'akuku oghere, na anyị na-egosi ha ebe a.
Ihe oyiyi ahụ wepụtara na Weibo site n'aka onye injinia Meizu wee gosi a ọkọlọtọ foto na n'akuku foto jidere ya na ihe ntanetị ultra-wide-angle dị n'otu ebe.
Ọkọlọtọ foto jidere na Meizu 16Xs
Foto dị obosara sara mbara nke enwetara na Meizu 16Xs
Foto dị n’elu mbara-igwe na-enweta otuto dị ukwuu n'ihi na enweghi ihe ngba aghara, nke bu aberration nke anya anya anya na ihe o na-eme bu uzo di n'ime.
Nke a na - eme mgbe oghere oghere dị obosara karịa nke ihe mmetụta sensọ; igwefoto na-agba mbọ ịkwụ ụgwọ site na-ekwe ka ahịrị kwụ ọtọ dabara. A na-ejikarị nghazi nghazi arụ ọrụ na-edozi mmetụta ahụ, ọ dịkwa ka ọ bụ na Meizu 16Xs na-eme ezigbo ọrụ nke ime ya.
Dị ka obere ihe a maara, Meizu 16Xs ga-abịa jiri ngosi AMOLED nke 6.2 nke anụ ọhịa nwere ihe ngosi mkpịsị aka na-egosipụta.. Ngwaọrụ a ga - eji 2.0 octa-core processor 6 GHz rụọ ọrụ, chipset ga - ejikọ ya na 64 GB nke RAM na XNUMX GB nke ebe nchekwa dị n’ime.
N'aka nke ya, o gha enwe igwefoto selfie nke 16 MP na a 48 MP + 5 MP + 8 MP okpukpu atọ n'azụ igwefoto. Meizu ga-agụnye batrị ikike 3,900 mAh ma zipu ekwentị ya A gam akporo tinye ya n'okpuru ụdị dị iche iche na nke kachasị ọhụrụ nke mkpuchi oyi akwa nke etinyebere na ekwentị ha mgbe niile, nke bụ Flyme OS.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » N'ihe banyere nlele igwefoto nke Meizu 16Xs nke na-akọwapụta ikike nke oghere ya dị obosara
Ndị SD SD gụnyere Huawei ọzọ na ndepụta ndị otu
Sony ọ na-arụkwa ọrụ na folda mpịachi?